Xfinity Student Discount (2020) - Ahoana no fomba hahazoana? - Tolotra
Xfinity dia mampifandray ireo olona manana Internet haingam-pandeha. Nanjary nilaina ho an'ny rehetra izy io tamin'ny taona 2020. Miaina tontolo iray mila Internet isika mba hidirana mora amin'ny fanabeazana, fialamboly ary fiaraha-miory. Ireo no andry telo amin'ny fifandraisana. Ny famandrihana Internet Xfinity dia hanampy anao hatrany.
Ireo mpampiasa dia afaka mahazo ny tombony amin'ny WiFi haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny fifandraisan'izy ireo. Tena mila drafitra mora vidy ireo mpianatra.Ny fihenan'ny mpianatra Xfinity dia hanampy anao amin'ity olana ity. Andao hojerentsika izay atolotry ny sehatra Xfinity ho an'ny rehetra.
Inona ny fihenan'ny mpianatra Xfinity?
Mpianatra amin'ny oniversite dia mila Internet amin'ny filan'ny kilasy isan'andro. Ilaina koa izy io amin'ny 2020.
Xfinity dia iray amin'ireo mpamatsy tolotra internet malaza indrindra any Etazonia. Azonao atao ny mividy drafitry ny mpianatra mora vidy hahazoana tombony lehibe amin'ny fifandraisana. Drafitra vaovao ity izay manome tombony be mpampiasa ho an'ireo mpampiasa vaovao. Ny toe-java-misy manerantany dia nahatonga antsika rehetra hody an-trano. Ny Internet sy ny tontolo virtoaly dia toa ny fomba mahazatra hifandraisana amin'ny olona.
Afaka mampiasa ny mpampiasa vaovao zahao raha afaka izy ireo ho an'ny drafitry ny mpianatra feno. Mpianatra amin'ny oniversite dia manana ny tombony azony amin'ny lovia.Xfinity dia mamoaka ity tetik'asa ity ho an'ny oniversite voafantina vitsivitsy. Izy ireo dia miara-miasa amin'ny oniversite hitondra anao ireo tombontsoa ireo.
Ireo mpampiasa dia afaka mampiditra ny antsipirihany ary manamarina raha afaka mahazo ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Xfinity. Miankina amin'ny faritra onenanao izany. Xfinity dia tsy misy manerana ny faritra rehetra. Hiverina any amin'ny mpanome tolotra hafa ny mpampiasa raha izany no izy. Ny tranokala Xfinity dia mila mampiditra fampahalalana manokana ilaina mba hanomezana anao drafitra manokana. Matetika izy ireo dia mampiroborobo ny serivisy Comcast amin'ny alàlan'ny drafitry ny mpianatra.
Drafitra sy vidin'ny Xfinity:
Ny drafitra Internet Xfinity dia mety miova arakaraka ny faritra misy anao. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo tombontsoa marobe amin'ny fisoratana anarana amin'ilay sehatra. Izahay dia hizara fanolorana santionany azo alaina ho an'ny mpianatra. Ny fihenan'ny mpianatra Xfinity dia mahatonga ny fifandraisana internet ho tena ilaina amin'ny rehetra. Andramo anio ary miasa ianao. Ireto misy safidy hafa azo atao.
1. hatramin'ny 200 Mbps
Ny drafitra 200Mbps dia handany $ 39,99 isam-bolana. Mahazo kitapo fametrahana-tena maimaimpoana amin'ity fividianana ity ny mpampiasa. Io no drafitra fototra ary io no safidy mora vidy indrindra azo atao. Mety ho an'ireo mpampiasa mampiasa Internet maivana izany. Azonao atao ny mitantana azy ao anaty tokantrano kely. Ny drafitra dia afaka manohana fitaovana hatramin'ny 8 indray mandeha.
2. Mahatratra 600 Mbps
Ny drafitra haingam-pandeha haingam-pandeha dia sahaza ho an'ireo mpianatra miaina miaraka amin'ny olona 10-15 — fomba iray hampiatoana ny ahiahinao rehetra. Fitaovana marobe no afaka mihazakazaka amin'ny fomba mahomby amin'ity famandrihana ity. Azonao atao ihany koa ny maka kitapo fametrahana-tena miaraka amin'ity drafitra ity. Mora ny manangana ary tsy manome anao manahirana. Ny programa dia handany anao $ 69,99 isam-bolana.
3. Hatramin'ny 1000 Mbps
Ny famaranana ambony indrindra amin'ny spectrum dia toa mamiratra. Izy io dia mitondra ny tombony rehetra azo avy amin'ny mpanjifa Xfinity.Ilaina ny Internet haingam-pandeha amin'ny taona 2020. Afaka mizara Internet amin'ny olona maro ianao.Ny bandwidth sy ny hafainganam-pandeha dia tena mandrisika ny mpampiasa. Andramo anio ary hiaina ny vokatra mahafinaritra amin'ity serivisy ity.
Ireto ny sasany amin'ireo drafitra azo alaina ho an'ireo mpampiasa Xfinity. Vidio ny drafitry ny mpianatrao anio hiaina Internet manana kalitao.
Endri-javatra amin'ny Xfinity:
Xfinity dia tsy mampandefitra ny kalitaon'ny fihenan'ny mpianatra. Izy ireo no marika fantatra amin'ny fifandraisana Internet avo lenta. Ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana an'ity serivisy mora vidy ity dia toy izao.
1. Internet azo antoka sy haingana
Xfinity Comcast dia marika iray azo ianteherana tanteraka ho an'ny mpanjifany rehetra. Azonao atao ny manantena ny haingam-pandeha haingana sy ny fifandraisana azo antoka. Mahatonga ny streaming atin'ny kalitao mivoaka mandritra ny tontolo andro. Ireo mpampiasa dia afaka mampifandray fitaovana marobe amin'ny fotoana iray ary mankafy ny seho asehony. Tokony hananana ireo izay manatrika fampianarana an-tserasera amin'izao fotoana izao. Andramo anio ary hiaina fifandraisana kalitao.
2. Fialamboly amin'ny toro-hevitrao
Fantatry ny ISP fa mety ho somary mangina ianao raha mijanona irery. Ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika no loharanom-pialan-tsasatra nandritry ny roa volana lasa. Ankehitriny ianao dia afaka mahazo ny zava-drehetra ao anatin'ny famandrihana iray ihany. Ny fihenam-bidy ataon'ny mpianatra Xfinity dia mitondra anao ny ankamaroan'ny atiny malaza indrindra azo jerena amin'ny Internet maimaim-poana. Ny fampiharana Xfinity Stream dia tonga lafatra amin'ny famonoana manga tsara.
Ilaina amin'ny olona maro ny mozika. Afaka mahazo fidirana amin'ny Amazon Music maimaim-poana ianao amin'ny fisoratana anarana Xfinity anao. Ireo mpanjifa vaovao dia afaka mampiasa ilay sehatra mahafinaritra mandritry ny enim-bolana. Ho azonao io mandritra ny enim-bolana. Raha vantany vao tapitra ny tolotra voalohany dia azonao atao ny manavao azy amin'ny vidiny $ 4.99 isam-bolana.
Ahiahy lehibe ny fiarovana an-tserasera satria manantena ny hitandrina tsara ny mombamomba azy ny tsirairay. Ny Internet no toerana fihazana be indrindra ho an'ireo izay te hangalatra angona manokana. Amin'ireny fotoana ireny, ilaina ny filaminana. Xfinity dia manome antoka fa ny mpanjifany rehetra dia mahazo tambajotra azo antoka. Afaka amin'ny hacks na ny fivoahan'ny data miaraka amin'ny drafitr'izy ireo ianao.
5. Mahazo bebe kokoa, mitsitsia bebe kokoa
Afaka mahazo tombony fanampiny ireo mpampiasa amin'ny fampiarahana ny fisoratana anarana. Azonao atao ny manangona $ 25 amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana finday Xfinity. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo mpianatra maniry fanoloran-tena maharitra. Izy ireo dia loharanom-pifandraisana azo antoka. Hanome anao valisoa izy ireo noho ny tsy fivadihan'ny marika amin'ny tolotra fanampiny.
Ireto ny sasany amin'ny tombony lehibe azo amin'ny fampiasana ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Xfinity. Mahazo tolotra tsara kalitao amin'ny vidiny mirary. Andramo anio ary mahazoa tombony premium.
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Xfinity dia serivisy vaovao ho an'ny mpamaky maro. Amin'ity toro-lalana ity dia mandrakotra ny fampahalalana rehetra ilaina izahay. Manantena izahay fa afaka manangona vola mora foana ianao ary mahazo fifandraisana premium. Hamarino raha afaka miatrika fihenam-bidy mahavariana ianao anio.
Toerana fandefasana sarimihetsika maimaim-poana
Iza no tsy ho hita ao amin'ny iCarly 2?
Rahoviana isika no afaka manantena an'arivony tapitrisa vanim-potoana faha-6?
ahoana ny fanovana ny youtube ho mp3?
tranonkala maimaim-poana hijerena sinema
ny fomba fampiasana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra amin'ny spotify
mijery tsy mivoaka maimaim-poana amin'ny Internet
ahoana no hanoratanao anarana amin'ny netflix
lalao hoditra seza minecraft